Abalị na-agbachi nkịtị, ndị dreidels na-akpọ nkụ, ndị ahịa gị na-emeghe obere akpa ha. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka gị ika akụkụ nke ha ezumike oge a eke na maa mma ụzọ, ha ga-echeta gị nke ọma n'ime New Year. Ndị a bụ ụfọdụ inye aka Na-emela ihe iji nyere gị aka ịnyagharịa oge.
Ezumike ezumike dị adị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mmetụta na ike gwụrụ ka December na-aga n'ihu. Ejila ihe ncheta email zụọ ndị ahịa gị ma ọ bụ jụọ ndị ọrụ gị ịhapụ Saturday ọ bụla iji rụọ ọrụ na mkpọsa ebere gị. Maka ihe niile dị nsọ, emela ndị ọrụ gị ka ha rụọ ọrụ n’oge mgbede ekeresimesi ma ọ bụ nke afọ ọhụụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere ya aka. Akụkụ nke ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ gị na-adabere n'ịdebe ezigbo ndị ọrụ obi ụtọ.
Dị ka ozi ejula na-aga n'ụzọ nke dinosaurs, izipu ezigbo kaadị na-enye gị ohere ịpụ na mkpọ ma mee obere ahịa. Mepụta kaadị mmapụta, tinye mgbaghoju anya nke na-ekpughe ozi ezumike ma ọ bụ chịkọta mkpokọta mara mma nke ụmụaka ndị ọrụ na anụ ụlọ na-eyi okpu ezumike. Nka a ozi puru iche banyere ndị ahịa gị na azụmahịa gị, ma ọ bụ nye ihe ndị na-ege gị ntị nwere ike iji. Gụnye coupon nke dị mma na Jenụwarị ma ọ bụ magnet friji pụrụ iche.
Emela: gbaa ngwọrọ
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa azụmahịa nke otu onye, ​​abalị ọ bụla nwere ike ịbụ ezumike ụlọ ọrụ ezumike gị. Ma na nnukwu ìgwè, ịtụba ihe omume ezumike nwere ike inye aka wusi mmụọ mmụọ ike - ọ bụrụhaala na ndị mmadụ chọrọ ịga. Hazie ọrụ na-adịghị arụ ọrụ, dị ka egwuregwu nke egwuregwu mkpado laser ma ọ bụ bowling. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na otu gị nwere mmasị ị toụ mmanya ya, gaba na ebe a na-eme biya ma ọ bụ mmanya. Gbalisie ike na ndị na-achọghị isonye na mmemme ahụ ka nwere ike ịga ma nwee anụrị.
Na-eche ihe kpatara na ị ga - echegbu onwe gị ịchọ mma ma ọ bụrụ na ndị ahịa anaghị abịakarị n’ọfịs gị. Debe foto nke ihe ịchọ mma gị na ntanetị mgbasa ozi gị iji gosipụta mmụọ mmemme gị. I nwekwara ike ime ka ndị na-ege gị ntị bịakwute gị site na ịhazi nri, uwe ma ọ bụ onyinye onyinye. Nye obere Kupọns ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ndị ọzọ iji gbanwere onyinye. Ndị ọrụ gị nwere ike ijikwa nkwakọ ngwaahịa na nnyefe nke onyinye, mgbe ndị ahịa batara, ihe ịchọ mma gị ga-adọrọ mmasị gị ma nwee ike ilele ọrụ ị nwere ike ịnye.